ချစ်သူများနေ့မှာ စင်ဂယ်လ် ဖြစ်နေရခြင်းရဲ့ အားသာချက်များ - For her Myanmar
ချစ်သူများနေ့မှာ စင်ဂယ်လ် ဖြစ်နေရခြင်းရဲ့ အားသာချက်များ
V-day မှာ ဖုံထလာတဲ့ Rs တွေကို ဒီလို ကြွယ်လိုက်ပါ
ချစ်သူများနေ့ နီးလာတော့ စင်ဂယ်လ်တွေ အားကျကြစမ်းဆိုပြီး Rs တွေ ဖုန်ထတာခံနေရပြီလား ယောင်းရေ။ သူတို့ ဖုန်ထလာတဲ့အခါ ပြောစရာမရှိမဖြစ်ရအောင် အက်ဒ်မင်က Valentine’s Day မှာ ဘာကြောင့် စင်ဂယ်လ်ဖြစ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းလဲ ဆိုတာ ပြောပေးမယ်နော်။
ဒါ အဓိကပဲလေ။ Rs တွေ ဟာ ဘယ်လောက် သနားဖို့ကောင်းလဲ။ ချစ်သူများနေ့ နီးလာပြီဆို မစားရက် မသောက်ရက် ပိုက်ဆံတွေစုရတယ်။ ပိုက်ဆံပိုရှာရတယ်။ လက်ဆောင်တွေဝယ်ရ၊ အစားအသောက်တွေအတူစားရနဲ့ ပိုက်ဆံတွေထွက်တယ်နော်။ Vday မတိုင်ခင် နဲ့ Vday အပြီးမှာ သူတို့တွေ မွဲနေချိန် ကိုယ်တွေက စင်ပေါ်ကနေ မုန့်လေးစားရင်းကြည့်နေရုံပဲ.. ငှင်းငှင်း..
Rs တွေကတော့ ထင်လိမ့်မယ်။ V-day မှာ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး စင်ဂယ်လ်တွေက အားကျနေတာလို့။ တကယ်က ဘယ်ဟုတ်မလဲ ယောင်းရယ်။ Single တွေက သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ပင်ပန်းလိုက်တာလို့ တွေးနေတာလေ။ လက်ဆောင်တွေ စိတ်တိုင်းမကျမချင်း ရှာဝယ်ရ၊ သွားဖို့ လာဖို့ ပြင်ဆင်ရ၊ အဝတ်အစားတွေ လိုက်ဖက်အောင် စီစဉ်ရနဲ့ မဟုတ်လား။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုယ်ကလည်း ညဝတ်အင်္ကျီလေးနဲ့ အိပ်ယာပေါ် မုန့်ထုပ်တွေနဲ့ နှပ်ရင်း သူတို့ပင်ပန်းတာ ထိုင်ကြည့်နေ.. အေးဆေးပဲ.. :3
Relative Article >>> ဥာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့ မိန်းကလေးတွေဘာကြောင့် Single ဖြစ်နေရတာလဲ
V-day မှာ Rs တွေဟာ လူရှေ့မှာသာ ပျော်တယ် ဘာတယ် လုပ်နေတာနော်။ သူတို့တွေ စိတ်ညစ်ရ စိတ်ပင်ပန်းရတာတွေ အများကြီး!!! အစီအစဉ်တွေက ထင်သလိုဖြစ်မလာလို့ စိတ်ညစ်ရ၊ ချစ်သူက လက်ဆောင်တွေကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့အတိုင်း မပေးလို့ စိတ်တိုရ၊ ရိုမယ်ထင်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်က ဂျင်းဖြစ်နေလို့ ငိုရ ဒါတွေကျ ဖုံးထား၊ ဖိထားပြီး ရိုတာလေးတစ်ကွက်တည်း ဒါ့ပုံရိုက် တင်နေကြရမှာလေ.. အံမာလေး.. အံခွနေဘီ ငိငိ..
Related Article >>> Singleတစ်ယောက်ရဲ့ အားသာချက်များ
၄။ ဘယ်သူနဲ့မှ ခွဲဝေစရာမလို
သူတို့ကတော့ ချောကလက်လေးတစ်တောင့်ကို နှစ်ယောက်ခွဲစားရတာများ ရိုတယ် ထင်ချင်ထင်မှာလေ။ ကိုယ်တွေကတော့ အေးဆေးပဲ… ကိုယ့်မုန့်ကို ဘယ်သူမှ လာထိလို့ မရဘူး :3 ဒီတော့ ချောကလက်တစ်တောင့် နှစ်ယောက်ခွဲစားမယ့်အစား ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ချောကလက်ပေါင်းစုံ ဗိုက်ကားအောင် စားလို့ရပါတယ်နော်။ (ဝယ်ပေးမယ့်သူ မရှိတာလေးကလွဲပြီးပေါ့လေ.. 😛 )
၅။ တစ်နေကုန် ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်
ကိုကိုရေ သည်းက ဒီဆိုင်မှာစားမယ် ဟာ သည်းကလည်း ကိုကိုက ဟိုဆိုင်ကြိုက်တာ.. ကြားဖူးနေတယ်မလား?? Rs တွေ ညှိနှိုင်းရင်း ရန်ဖြစ်နေကြတဲ့ အသံတွေလေ…
စင်ဂယ်လ်တွေ ဆိုသည်မှာ ဘာမှညှိနှိုင်းစရာမလို။ ဟယ် ဟိုဆိုင်စားချင်တယ် ဝင်စားလိုက်၊ ဟယ် ဟို ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တယ် ဝင်ကြည့်လိုက်ရုံပဲ ဘယ်လောက်များ ပျော်စရာကောင်းလဲကွယ်။
ကဲ .. စင်ဂယ်လ် ယောင်းလေးတို့ရေ စင်ဂယ်လ်ဖြစ်ခွင့်ရတာ ဘယ်လောက်များ ကံကောင်းလဲဆိုတာ Rs တွေကို ပြောပြရင်း ချေနိုင်ပြီဟုတ်? အဲ..အဲ… သူတို့ ပြန်ပြောစရာ ရှိသေးတယ်..V-day အတွက်ဆိုရင် ချစ်သူတွေအတွက်ပဲ ပွဲတွေ လုပ်ပေးကြတာလေ.. နင်တို့ စင်ဂယ်လ်တွေအတွက် ဘာပွဲရှိလို့လဲဆိုပြီးတော့ပေါ့… ဒီအခါလည်း ခေါင်းငုံ့မခံနဲ့နော် ယောင်းတို့.. ယောင်းတို့ဘက်က မင်မင်တို့ ရှိဒေ 😀
စင်ဂယ်လ်လေးတွေအတွက် V-day ညမှာ စီစဉ်ထားတဲ့ Singles’ Night လေးသာ လက်ညှိုး ထိုးပြပြီး ပြန်မေးလက်!! နင်တို့တွေအတွက် Mask Party ရှိသလားလို့ .. အယ်လဲ့…. ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ်ပြန်ပြောပြပြီး ချေချချင်ရင်တော့ ဒီ လင့်ခ် လေးမှာ ကြည့်ကြပါ ယောင်းတို့.. ကြည့်ရင်း စိတ်ပါလာရင်တော့ ဒီလင့်ခ် လေးမှာ Register လုပ်ပြီး ပွဲလာလို့ ရပါတယ်လို့…
စင်ဂယ်လ်ဘဝမှာ လွတ်လပ်စွာ များများပျော်နိုင်ကြပါစေလို့ အက်ဒ်မင်ကလည်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်!!
V-day မှာ ဖုံထလာတဲ့ Rs တှကေို ဒီလို ကွှယျလိုကျပါ
ခဈြသူမြားနေ့ နီးလာတော့ စငျဂယျလျတှေ အားကကြွစမျးဆိုပွီး Rs တှေ ဖုနျထတာခံနရေပွီလား ယောငျးရေ။ သူတို့ ဖုနျထလာတဲ့အခါ ပွောစရာမရှိမဖွဈရအောငျ အကျဒျမငျက Valentine’s Day မှာ ဘာကွောငျ့ စငျဂယျလျဖွဈရတာ ပြျောစရာကောငျးလဲ ဆိုတာ ပွောပေးမယျနျော။
ဒါ အဓိကပဲလေ။ Rs တှေ ဟာ ဘယျလောကျ သနားဖို့ကောငျးလဲ။ ခဈြသူမြားနေ့ နီးလာပွီဆို မစားရကျ မသောကျရကျ ပိုကျဆံတှစေုရတယျ။ ပိုကျဆံပိုရှာရတယျ။ လကျဆောငျတှဝေယျရ၊ အစားအသောကျတှအေတူစားရနဲ့ ပိုကျဆံတှထှေကျတယျနျော။ Vday မတိုငျခငျ နဲ့ Vday အပွီးမှာ သူတို့တှေ မှဲနခြေိနျ ကိုယျတှကေ စငျပျေါကနေ မုနျ့လေးစားရငျးကွညျ့နရေုံပဲ.. ငှငျးငှငျး..
Rs တှကေတော့ ထငျလိမျ့မယျ။ V-day မှာ သူတို့ကိုကွညျ့ပွီး စငျဂယျလျတှကေ အားကနြတောလို့။ တကယျက ဘယျဟုတျမလဲ ယောငျးရယျ။ Single တှကေ သူတို့ကိုကွညျ့ပွီး ပငျပနျးလိုကျတာလို့ တှေးနတောလေ။ လကျဆောငျတှေ စိတျတိုငျးမကမြခငျြး ရှာဝယျရ၊ သှားဖို့ လာဖို့ ပွငျဆငျရ၊ အဝတျအစားတှေ လိုကျဖကျအောငျ စီစဉျရနဲ့ မဟုတျလား။ ဒီလိုအခြိနျမှာ ကိုယျကလညျး ညဝတျအင်ျကြီလေးနဲ့ အိပျယာပျေါ မုနျ့ထုပျတှနေဲ့ နှပျရငျး သူတို့ပငျပနျးတာ ထိုငျကွညျ့နေ.. အေးဆေးပဲ.. :3
Relative Article >>> ဉာဏျရညျမွငျ့မားတဲ့ မိနျးကလေးတှဘောကွောငျ့ Single ဖွဈနရေတာလဲ
V-day မှာ Rs တှဟော လူရှမှေ့ာသာ ပြျောတယျ ဘာတယျ လုပျနတောနျော။ သူတို့တှေ စိတျညဈရ စိတျပငျပနျးရတာတှေ အမြားကွီး!!! အစီအစဉျတှကေ ထငျသလိုဖွဈမလာလို့ စိတျညဈရ၊ ခဈြသူက လကျဆောငျတှကေို ကိုယျလိုခငျြတဲ့အတိုငျး မပေးလို့ စိတျတိုရ၊ ရိုမယျထငျထားတဲ့ စားသောကျဆိုငျက ဂငျြးဖွဈနလေို့ ငိုရ ဒါတှကြေ ဖုံးထား၊ ဖိထားပွီး ရိုတာလေးတဈကှကျတညျး ဒါ့ပုံရိုကျ တငျနကွေရမှာလေ.. အံမာလေး.. အံခှနဘေီ ငိငိ..
Related Article >>> Singleတဈယောကျရဲ့ အားသာခကျြမြား
၄။ ဘယျသူနဲ့မှ ခှဲဝစေရာမလို
သူတို့ကတော့ ခြောကလကျလေးတဈတောငျ့ကို နှဈယောကျခှဲစားရတာမြား ရိုတယျ ထငျခငျြထငျမှာလေ။ ကိုယျတှကေတော့ အေးဆေးပဲ… ကိုယျ့မုနျ့ကို ဘယျသူမှ လာထိလို့ မရဘူး :3 ဒီတော့ ခြောကလကျတဈတောငျ့ နှဈယောကျခှဲစားမယျ့အစား ကိုယျ့စိတျကွိုကျ ခြောကလကျပေါငျးစုံ ဗိုကျကားအောငျ စားလို့ရပါတယျနျော။ (ဝယျပေးမယျ့သူ မရှိတာလေးကလှဲပွီးပေါ့လေ.. 😛 )
၅။ တဈနကေုနျ ကိုယျကွိုကျတာ ကိုယျလုပျ
ကိုကိုရေ သညျးက ဒီဆိုငျမှာစားမယျ ဟာ သညျးကလညျး ကိုကိုက ဟိုဆိုငျကွိုကျတာ.. ကွားဖူးနတေယျမလား?? Rs တှေ ညှိနှိုငျးရငျး ရနျဖွဈနကွေတဲ့ အသံတှလေေ…
စငျဂယျလျတှေ ဆိုသညျမှာ ဘာမှညှိနှိုငျးစရာမလို။ ဟယျ ဟိုဆိုငျစားခငျြတယျ ဝငျစားလိုကျ၊ ဟယျ ဟို ရုပျရှငျကွညျ့ခငျြတယျ ဝငျကွညျ့လိုကျရုံပဲ ဘယျလောကျမြား ပြျောစရာကောငျးလဲကှယျ။
ကဲ .. စငျဂယျလျ ယောငျးလေးတို့ရေ စငျဂယျလျဖွဈခှငျ့ရတာ ဘယျလောကျမြား ကံကောငျးလဲဆိုတာ Rs တှကေို ပွောပွရငျး ခနြေိုငျပွီဟုတျ? အဲ..အဲ… သူတို့ ပွနျပွောစရာ ရှိသေးတယျ..V-day အတှကျဆိုရငျ ခဈြသူတှအေတှကျပဲ ပှဲတှေ လုပျပေးကွတာလေ.. နငျတို့ စငျဂယျလျတှအေတှကျ ဘာပှဲရှိလို့လဲဆိုပွီးတော့ပေါ့… ဒီအခါလညျး ခေါငျးငုံ့မခံနဲ့နျော ယောငျးတို့.. ယောငျးတို့ဘကျက မငျမငျတို့ ရှိဒေ 😀
စငျဂယျလျလေးတှအေတှကျ V-day ညမှာ စီစဉျထားတဲ့ Singles’ Night လေးသာ လကျညှိုး ထိုးပွပွီး ပွနျမေးလကျ!! နငျတို့တှအေတှကျ Mask Party ရှိသလားလို့ .. အယျလဲ့…. ပှဲအကွောငျး အသေးစိတျပွနျပွောပွပွီး ခခြေခြငျြရငျတော့ ဒီ လငျ့ချ လေးမှာ ကွညျ့ကွပါ ယောငျးတို့.. ကွညျ့ရငျး စိတျပါလာရငျတော့ ဒီလငျ့ချ လေးမှာ Register လုပျပွီး ပှဲလာလို့ ရပါတယျလို့…
စငျဂယျလျဘဝမှာ လှတျလပျစှာ မြားမြားပြျောနိုငျကွပါစလေို့ အကျဒျမငျကလညျး ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျရှငျ!!
Tags: Fun, love, Single, Valentines Day